धरापमा अनमोलको स्टारडम, ठूलो अभाव खड्कीदै — OnlineDabali
धरापमा अनमोलको स्टारडम, ठूलो अभाव खड्कीदै
Posted on February 14, 2018 by अनलाइन डबली
काठमाडौँ । एक वर्षअघि भारतमा कमेडियनद्वय कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोबरबीच विवाद चुलिएको बेला बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले स्टारडममाथि निकै घतलाग्दो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
कपिललाई सुुझावस्वरुप आफ्नो अनुुभव सुनाउँदै भनेका थिए, ‘मान्छेले सधैँ आफ्नो स्टारडमलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ । म अहिले करिअरको यस्तो घडीमा छु कि अक्सर मान्छे मेरो काममा ‘हो मा हो’ मिलाउँछन् । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ आफू सही दिशामा छु या गलत, मलाई ठम्याउनै मुस्किल पर्छ । त्यसैले म आफ्नो परिवार र साथीहरुको सुुझावलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिन्छुु किनभने उनीहरु नै हुन्,जसले मलाई जमिनमै टिकाइरहन्छन् हावामा उड्न दिँदैनन् ।’
नेपालमा अहिले जताततै अनमोल केसीको चर्चा छ । उनकै हाइहाइ छ । फिल्म इन्डस्ट्रीसँग जोडिएका बहुमत अहिले उनीसँग काम गर्न लालायित छन् । उनी नेपाली फिल्मका दर्शकलाई हलसम्म तान्ने चुम्बक बनेका छन् । उनलाई भेट्नसँगै फोटो खिचाउन युवायुवतीको ठूलो समूह मरिहत्ते गर्छन् ।
ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ–अनमोलले यस्तै फिल्म खेलिरहने हो भने उनको ओरालो गति निक्कै तीव्र हुनेछ । जहाँ ब्रेक लाग्दा आउने नतिजा पनि दुघर्टना मात्रै हो ।
वास्तविकता यही हो-अनमोल यतिखेर नेपाली फिल्मीनगरीका स्टार हुन् उनको गजबको स्टारडम देखिएको छ । यस्तो स्टारडमले फिल्मको अर्थतन्त्र एक्लै धान्न सक्छ ।
अनमोलको प्रयासमा गम्भीरता देखिन्छ तर फिल्मभरि केही हेर्नलायक कुरा छ भने त्यो अनमोलका केही एक्सन दृश्य मात्रै हुन् । बाँकी सबै ‘बोरिङ’ । फिल्ममा पटक–पटक भिलेनले चार करोडको माल गायब भएको भनेर रिसाइरहन्छ तर त्यो माल कसरी र के भएर गायब भयो फिल्म सकिदासम्म रहस्य खुल्दैन ।
‘लाहुरे’ अनमोलसँग बिहे गर्न एक हुल युवती उनकै घरमा लाम लागेर आउँछन् र अनमोलकै हजुरआमाले छान्न लगाउँछिन् । यो समयमा ‘मलाई छान न, मलाई’ भन्दै युवतीहरुले गरेको त्यस्तो आग्रह कति स्वभाविक देखिएला ? जब अनमोल आफ्नो बाल्यकालको प्रेमी हो भनेर केशरले थाहा पाउँछिन् उनी जिन्स प्यान्ट र टप लगाएर घरबाट दगुरेर कुदिछन् ।
चम्म, जब उनी घरबाहिर पुग्छिन् ड्रेस गायब । एकै पटक कुर्ता सुरुवालमा देखिन्छिन् । यस्ता दृश्य फिल्ममा धेरै छन् ।
‘कृ’ न दर्शकसँग जोडिन सकेको छ न यसले दर्शकको दिमागलाई व्यस्त राख्न नै । यति भन्न सकिन्छ, यो फिल्म नबनेको भए पनि नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई घाटा हुने थिएन । अनमोलका लागि अर्को दुःखको कुरा, उनका डाइहार्ड फ्यानलाई पनि यो फिल्मले रिझाउन मुस्किलै छ । कारण, उनका अघिल्ला चार फिल्मभन्दा पनि झुर छ ‘कृ’ मा वास्तविकता यही हो ।
एउटा पर्फेक्ट अभिनेता हुनलाई आकर्षक लुक्स भएरै मात्रै पुग्दैन, ऊ ‘एक्सप्रेसिभ’ पनि हुन सक्नुपर्छ । निर्वाह गरिरहेको क्यारेक्टरलाई केले निर्देश गरिरहेको छ ? यसका आवश्यकता के-के हुन् ? यिनीहरु किन यसरी अभिनय गर्छन् ? चरित्रको व्यवहार बारेमा ऊसँग राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ ।
राम्रो एक्टर उत्तिकै कल्पनाशील पनि हुनुपर्छ उसको काम ती मान्छेहरुको अनुकरण गर्नु हो, जो स्वयम् तिनीहरु होइनन् ।
त्यसैले नयाँनयाँ मान्छेहरुलाई हेर्नु, भेट्नु र उनीहरुको काम नियाल्नु, उनीहरु जे काम गर्छन् त्यो किन गर्छन् भनेर जान्न खोज्नु राम्रो अभिनेताको गुण हो । अनमोलका पाँचवटै फिल्मलाई नियालेर हेर्दा उनमा यसको ठूलो अभाव खड्किन्छ ।
अदिती बुढाथोकी जोय पपैया सनको ब्राण्ड एम्वेसडर
प्रदेश नं.६ मा सात वटा मन्त्रालय